Wararka Maanta: Sabti, Apr 7 , 2012-Ciidamada Dowladda KMG ah iyo kuwa Itoobiya oo la wareegay Degmooyinka hor leh oo ku yaalla Gobolka Bay
Ciidamada Dowladda KMG ah iyo kuwa Itoobiya oo la wareegay Degmooyinka hor leh oo ku yaalla Gobolka Bay Sabti, Abriil 07, 2012 (HOL) — Ciidamada DKMG ah iyo kuwa Itoobiya ee ku sugan gobolka Bay ayaa saddex degmo oo gobolkaas ka tirsan kala wareegay 24-kii saac ee lasoo dhaafay xoogagga Al-shabaab.
Degmooyinka ay ciidamadan la wareegeen ayaa waxay kala yihiin: Qansax-dheere, Buurhabaka iyo Ufuroow, waxaana laba degmo oo ka mid ah ay qabsadeen iyadoo aysan dhicin wax dagaallo ah, halka degmada kalena ay dagaal ku qabsadeen.
"Ciidamada dowladdu waxay la wareegeen 24-kii saac ee ug dambeeyay saddex degmo oo kooxaha cadowga ah ay kaga sugnaayeen gobolka," ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha maamulka gobolka Bay ee dowladda KMG ah.
Degmada Qansax-dheere oo 90-km u jirta degmada Baydhabo ayay ciidamada is-garabsanaya kala kulmeen dagaal, waxaana dagaalkaas oo khasaaraha uu dhaliyay aan la ogeyn kaddib u suurogashay ciidamada DKMG ah iyo kuwa Itoobiya inay si buuxda ula wareegeen degmada Qansax-dheere shalay oo Jimco ahayd.
Goobjoogayaal ku sugan degmada Qansax-dheere ayaa u sheegay HOL in dagaalka uu ahaa mid culus, ayna hadda ku sugan yihiin gudaha degmadaas ciidamada DKMG ah iyo kuwa Itoobiya.
Xarakada Al-shabaab ayaan weli ka hadlin degmooyinka gacantooda laga bixiyay iyadoo saddexdan degmo ay ka dhigayaan degmooyinka gobolka Bay ku yaalla ee laga qabsaday Al-shabaab shan degmo.
Degmada Diinsoor oo ku hartay gacanta Al-shabaab ayaa waxaa la sheegayaan in ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya ay ku wajahan yihiin saakay oo Sabti ah. Haddii ay qabsadaanna gobolka Bay wuxuu noqonayaa gobolkii ugu horreeyay oo ay dowladdu si buuxda uga qabsato Al-shabaab marka laga reebo Muqdisho.Maxamed Xaaji Xuseen, Hiiraan Onlinemaxuseen@hiiraan.comMuqdisho, Soomaaliya
Sabti, Abriil 07, 2012 (HOL) — Guddoomiyaha baarlamaanka KMG ah ee Soomaaliya, Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo wafdi uu hoggaaminayo oo baqonimadii maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyagoo kusii jeeda magaalada Xudur ee gobolka Bakool, halkaasoo ay todobaad ka hor la wareegeen ciidamada DKMG ah iyo kuwa Itoobiya oo iskaashanaya. Ganacsatada Soomaalida iyo kuwa Turkiga oo sameysay Urur iyo tahriibayaal ay Soomaali ku jirto oo lagu qabtay Turkiga 4/7/2012 9:45 AM EST
Sabti, Abriil 07, 2012 (HOL) — Ganacsatada Soomaalida iyo kuwa Turkiga ayaa ku sameysay kulan ay Muqdisho ku yeesheen Khamiistii lasoo dhaafay urur ganacsi oo ay ku mideysan yihiin, iyadoo la sheegay in ujeedka ururkan uu yahay sidii labada dal ay albaabooyinka ganacsiga isku dhaafsan lahaayeen. Xildhibaannada doortay Madoobe Nuunow oo sheegay inay dooranayaan Madaxweyne cusub soona bandhigay Shuruudaha Murashaxiinta 4/7/2012 9:44 AM EST
Sabti, Abriil 07, 2012 (HOL) — Abaanduulaha ciidamada milateriga Soomaaliya, Jen. C/kariim Yuusuf Aadan (Dhego-badan) ayaa ka badbaaday qorshe lagu dili lahaa oo ay qabanqaabinaysay Xarakada Al-shabaab, kaddib markii la qabtay jaakad la doonayay in lagu qarxiyo. Somali News